यसकारण देखियाे बैंकमा पैसा अभाव, तरलता संकट समाधानका ५ उपाय – Nepal Journal
Posted By: Nepal Journal January 2, 2018 | १८ पुष २०७४, मंगलवार १२:१८
गएको साता यता वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव रहेको भन्दै नेपालको बैंकिग क्षेत्रमा हलचल मच्चिएको छ । तर नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बजारमा गरिएको हल्लाजस्तो तरलताको अभाव नरहेको बताउँदै आएको छ । वास्तवमा वित्तीय बजारमा अहिले देखिएको समस्या र समाधानका उपाय के हो त ? राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापाको विश्लेषण ।
कारण १.बैंकहरुले अहिले आफूले संकलन गरेको निक्षेप भन्दा धेरै कर्जा परिचालन गरका छन । यो चार महिनाको अबधिमा बैंकहरुको कर्जा विस्तार १७.५ प्रतिशत रह्यो । बैंकहरुको पछिल्लो कर्जा संकलन १४.९ प्रतिशत मात्र छ ।
अहिलेको यो अवस्था आउनुको पहिलो कारण बैंकहरुले आफ्नो निक्षेपलाई नहेरी जथाभावी कर्जा विस्तार गरेर हो । कर्जा र निक्षेप बीचमा नकारात्मक ग्याप रहन पुग्यो,जस्ले गर्दा तरलतामा चाप पर्यो ।
गत साउनदेखि पुस ९ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुले १०६ अर्ब निक्षेप परिचालन गरेका छन् भने कर्जा विस्तार १६० अर्बले गरे । कर्जा परिचालन र निक्षेपको बिचमा ५४ अर्बको ग्याप रह्यो । त्यो ग्याप तरलतामा संकट पर्ने मुख्य कारण हो । बैंकहरु आक्रामक कर्जा विस्तारमा लागेका कारण यो संकट देखिएको हो । समाधान के हुन सक्थ्यो ? निक्षेप संकलनको आधारमा कर्जा विस्तार गरेको भए यो संकट आउने नै थिएन ।
कारण २ नेपालको अर्थतन्त्रमा इन्जेक्सन हुने बाह्य तरलता त्यसको आधार भनेको शोधानान्तर बचत हो ।नेपालको परिस्थीतिमा बिप्रेषण अाप्रवाह हो । यो चार महिनामा नेपालको शोधानान्तर बचत २ अर्ब ४० करोड मात्र हो । अघिल्लो वर्ष यसै समयमा झण्डै सो बचत झण्डै २२ अर्ब थियो । अर्को तर्फ विप्रेषण आप्रवाह १.४ प्रतिशतले घट्यो । गत वर्ष पहिलो चार महिनामा २३२ अर्ब विप्रेषण आप्रवाह नेपालले प्राप्त गरेको थियो भने अहिले २२८ अर्ब मात्र प्राप्त गर्यो । यसले पनि तरलतामा असर पर्यो ।
कारण ३. नेपाल सरकारको वित्तीय अवस्थाको प्रभाव पनि तरलतामा पर्यो । नेपाल सरकारको स्थानीय तह समेतको गरि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आजको मितिसम्म ३४० अर्बको मौज्दात छ । जस्ले गर्दा बजारको तरलता खिचिन गयो । अनि तरलतामा चाप पर्यो । यदि सरकारले आन्तरिक ऋणका परिचालन गरेको रकम चालु खर्च, पूँजीगत खर्च अनि वित्तीय व्यवस्थापन मार्फत खर्च गरेको भए सायद अहिलेको अवस्था आउँदैन थियो ।
कारण ४. अघिल्लो वर्ष यसै समयमा वित्तीय अवस्थामा चाप परेको थियो । त्यतिबेला वित्तीय संस्थाले उच्च ब्याजदरमा संस्थागत निक्षेप लिएका थिए । त्यो निक्षेप परिपक्व हुने क्रममा छ । त्यो निक्षेप आफैसँग राख्नका लागि केही बैंकहरु आत्तिएर बढी ब्याज दिन थाले । त्यही कारणले पनि बजारमा दबाब परेको कुरा बाहिर गयो ।
कारण ५. केही चाँही बैंकहरुमै समस्या छ । २८ ओटा वाणिज्य बैंकहरु छन् । यी मध्ये केही बैंकहरुको बिजनेस मोडल राम्रो छैन । उनीहरुले कर्जा प्रबाह गर्ने भनेको निक्षेप हो, दोस्रो पूँजी हो, तेस्रो सापटी हो । केही ठूला बैंकहरुले निक्षेपलाई आधार मानेर कर्जा बिस्तार गर्छन । केही बैंक यस्ता पनि छन्, अर्को बैंकबाट सापटी लिएर कर्जा प्रबाह गर्छन् । त्यसको ब्याजदर निकै न्युन हुन्छ । न्युन ब्याजदरमा आन्तरिक बैंकिङ ऋण लिएर चर्को ब्याजदरमा साना ऋणीलाई कर्जा परिचालन गर्ने जोखिमपूर्ण काम केही साना बैंकहरुले तीन चार वर्षदेखि गर्दै आए ।
१४५ अर्ब मध्ये सरकारले आन्तरिक ऋण ११० अर्ब उठाई सकेको छ । जसले गर्दा तरलता सुक्न पुग्यो जस्को प्रत्यक्ष प्रभाव ब्याजदरमाथि पर्न गयो । अर्को बैंकबाट ऋण लिएका बैंकहरुलाई अब मुस्कील पर्न गयो । ऋण निश्चित गरि सकेका छन् तर बजारबाट त्यसरी पैसा सापटी लिन नसक्ने भए र चर्को ब्याजदरमा विड गर्न पुगे जसले गर्दा बजारमा गलत म्यासेज गयो । ब्याजदर बढ्न पुग्यो ।
कारण ६. नेपाल सरकारको कुल राजश्व लक्ष्य ७३० अर्बको ४० प्रतिशत हिस्सा पुस मसान्त भित्र उठाउने लक्ष्य राखेको छ । पुस महिनामा ७० अर्ब हाराहारी राजश्व सरकारले उठाउँछ । बजारको तरलता पुस मै सरकारमा जान्छ । त्यसैले बैंकहरु आत्तिए । निक्षेप खोसा खोस गर्न थाले ।
माथिका कारणहरुको परिणाम स्वरुप अहिलेको नेपालको वित्तीय बजारमा असहज अवस्था आएको छ ।
समाधानका पाँच उपाय
पहिलो उपायः अब हामीले यसको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर मार्फत रिपो गरेर तरलता पठाउँछौ । अहिलेको रिपो दर ५ प्रतिशत ब्याजमा वाणिज्य बैंक, विकास र वित्त कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले तरलता दिन्छ । राष्ट्र बैंकले बजारको तरलता अभाव हटाउने गरी आवश्यक मात्रामा तरलता पठाउँछ ।
दोस्रो उपायः नेपाल सरकारको दिर्घकालीन प्रकृतिको विकास ऋण पत्रमा वाणिज्य बैंक, विकास र वित्त कम्पनीहरुले लगानी गरेका छन् । यो वर्ष मात्रै साउनदेखि यता ७२ अर्बको बिकास ऋण पत्रमा लगानी गरेका छन् । करीब २३५ अर्बको विकास ऋण पत्र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुसँग छन् । त्यो ऋण पत्र राष्ट्र बैंकले खरिद गरेर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले केही समय अघि गरेको आह्वानमा २१ कम्पनीको १८ अर्ब हाराहारी बोलकबाेल हालेका थिए । आईतबार मात्रै राष्ट्र बैंकले ५ अर्बको विकास ऋण पत्र खरिद गरेको छ । आवश्यकता अनुसार त्यस्ता ऋण पत्र खरिद गदै लगिने छ ।
तेस्रो उपाय : बैंकहरुलाई साह्रै गाह्रो पर्यो भने स्थायी तरलता सुबिधा अर्न्तगत पनि तरलता दिन सकिन्छ । विकास ऋण पत्र, ट्रेजरी बिल धितो राखेर ७ प्रतिशत ब्याजदरमा तरलता लान सकिन्छ । ३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदर जुन अत्यन्त सस्तो ब्याजदर हो ।
चौथो उपाय : बैंकहरुलाई जथाभावी कर्जा विस्तारमा कडाइ गर्ने । बैंकलाई जथाभावी कर्जा विस्तार गर्नलाई राष्ट्र बैंकले पैसा दिने छैन ।
पाँचौँ उपाय :सीसीडी अनुपात नघाएर कर्जामा लगानी गर्न बन्द गर्ने । कुनै पनि संस्थाले सीसीडी अनुपात नघाउन देउ भन्छ भने उसले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढाउन देउ भनेको भन्ने हुन्छ, त्यो गर्न राष्ट्र बैंक तयार छैन ।
यो विश्लेषण राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापासँगको कुाराकानीमा आधारित रहेर तयार पारिएको हो।
कारोबार सुरु गरेको दश बर्षपछि मात्र संस्थापक सेयर साधारणमा रुपान्तरण गर्न पाईने
सेवा अबधिको विषयलाई लिएर राष्ट्र बैंकमा तनाव, डेपुटी गभर्नर र कर्मचारी युनियनबिच तँ तँ र म म
राष्ट्र बैंकले दुई अर्ब ३१ करोड लगानी गर्ने, बैंकहरुसँग माग्यो प्रस्ताव
Be the first to comment on "यसकारण देखियाे बैंकमा पैसा अभाव, तरलता संकट समाधानका ५ उपाय"